Esikhathini DC Comics yonke, izinhlamvu ezintsha avele njalo. Lokhu kwenziwa waphinda hhayi ukudida abafundi, futhi ngoba kunzima ngempela beveza iqhawe ezithakazelisayo ngempela.
New Betgerl Kassandra Keyn, lalivela ezinhlamvini emakhasini bopopayi ngo-1999, waba emisha yimpumelelo kakhulu DC kule minyaka engamashumi amabili. Ngingakhululeki biography intombazane wenze wakhe intandokazi zabafundi abaningi emhlabeni jikelele.
DC Comics yonke
Umshicileli amahlaya DC Ezokuzijabulisa - lokhu ingenye izinkampani ezimbili ezaziwa kakhulu emhlabeni onguchwepheshe ukudalwa amanoveli ingcaca. Kuyinto kuye esintwini kufanele sibonge ngokuba ukubukeka Superman, Batman, Flash, Green Lantern noJohane uConstantine.
Zonke izinhlamvu yale ncwadi yamahlaya abamemezeli zihlobene komunye nomunye futhi bangabohlobo yonke olulodwa DC.
Duzane zonke iqhawe uhlale inombolo encane ayebambisene nabasizi. Superman is umzala wakhe, Supergirl, uLois Leyn, uCaptain Marvel, Wonder Woman namanye amalungu Wezobulungiswa League. Okungenani eyaziwayo Dark Knight ka Ubutha City - ukhomishana Dzheyms Gordon, Catwoman, Robin futhi Betgerl. Uma Gordon futhi Selina Kyle - nesizwe esithile, khona-ke buso kanye Robin Betgerl ngezikhathi ezahlukahlukene ukufihla abantu ezahlukene ngokuphelele isiphetho sabo eziyinkimbinkimbi.
DC superheroine okusha okuthiwa Kassandra Keyn
Le ntombazane ingxenye yesine emlandweni Ubutha Betgerl.
It uqala ukuvela emakhasini udaba 567-th yencwadi yamahlaya Batman ngoJulayi 1999
"Abazali" Miss Kane kuyinto abasha lochaza American Damion Scott, uKelli Pakett umbhali kanye umhleli uJordan B. Garfinkel.
Kuyaphawuleka ukuthi kwakuyizwi Betgerl lokuqala okuyinto solo ncwadi yamahlaya uchungechunge yadalwa.
Umsuka wegama Heroine futhi ebuntwaneni
Abazali Betgerl esizayo, izigebengu Isimanga siwukuthi, waba sasivumela owaziwa: owayebulele of China egameni Lady Shiva nezinye killer ngokulinganayo owaziwa Devid Keyn.
Ngisho engakazalwa wentombazanyana, uyise kuhlelwe ukuba kumile ke umvikeli ekahle Ra sika Al Ghul. Ngaphansi inkontileka ne Lady Shiva, ngokushesha nje Cassandra wazalwa, uDavide wamthatha kuye futhi baphakamisa. Njengoyise gxila ukuthuthukiswa kwamakhono ukulwa wengane yakhe futhi engakathenjiswa umshado ekufundiseni indodakazi ikhono lokukhuluma, ubuchopho ingane uye washintsha ezinkulu, futhi kamuva Cassandra athuthukile-dyslexia.
Naphezu kweqiniso lokuthi abasha Miss Kane wayengakwazi ukukhuluma, ukufunda nokubhala, ubuchopho bakhe inxephezelwa salokhu enekhono lokubona umzimba ulimi kwabanye abantu, kanye sikulindele izenzo zabo.
Lapho Cassandra emihlanu nje ubudala, Devid Keyn waqala ukuya naye naye "umsebenzi" indodakazi yakhe baqala siphathe abanye ukubulala njengomsebenzi into evamile.
Ngemva kweminyaka emithathu, wabamukisa intombazane ukubulala Fayzula. Njengoba i nendodakazi elalelayo, Kassandra Keyn kugcwalise ukulaya kukayise, kepha, ngoba siqaphela ukuthi ukubulala okunjalo empeleni, wazizwa ukuya ke, babaleka upapa izinhlelo zakhe ezinkulu.
Ngemva kweminyaka engu-eziyisishiyagalolunye zokuphila ezimele Cassandra wachitha ukuhamba emhlabeni. Uma kanye Ubutha, wathuthela eduze uBarbara Gordon, ukufihla ngaphansi hacker-alias Oracle. Ngemva kokuba bophulwe ongamzali Barbara - James Gordon - kuyise, Batman waphawula wakhe futhi wazicelela ukuba abe Betgerl entsha.
Cassandra ekwazile kakhulu ukusondelana Oracle kanye Dark Knight, Bryus Ueyn futhi kamuva wazala yayo esemthethweni wokutholwa.
Ngokuhamba kwesikhathi, Kassandra Keyn ngakho ngempumelelo alwa icala Ubutha, usingababa kuyivumela usebenze ngokuzimela uma Ngeke silwe villains ayingozi kakhulu efana Joker.
Phakathi naleso sikhathi, Devid Keyn enquma ukuphindela ingane yabo ngendlela "efanele". Ukuze embroil Owesifazane Batman, uthumela Dark Knight eqoshiwe lokubulala lokuqala Cassandra. Nokho, lokhu akusebenzi, kodwa kunalokho, esihlanganisa usingayise nendodakazi kuphela.
Kamuva, i-Heroine izincwadi zamahlaya ukuthonywa a telepath ezinamandla, okuyinto ubuyisela ukusebenza evamile ubuchopho bakhe, futhi efunda ukukhuluma, kodwa alahlekelwe ikhono landulele izenzo zabantu futhi "funda" kubo. Batman ubezama angasiza amakomidi akhe ukuze bathole amakhono amasha, kodwa kwaba fixated kakhulu phezu alahlekile. Kamuva, yena wayebhekene umama wakhe omzalayo, futhi yena amfundise, uma ekugcineni Kassandra ukulwa naye.
Njengoba isikhathi siqhubeka, ngokufunda ukulwa kahle, Miss Kane Wayne weza ukulwa nonina. Nokho, ngomqondo othile elilimaza yecala neze wamyeka ngoba Fayzula ukubulala, okubangela imicabango wentombazane ukuzibulala. Ngakho-ke, yena wanqotshwa Lady Shiva, okuvumela ukuzibulala. Eqaphela isimo namadodakazi, umama savuka yakhe wayiphoqa ukuba alwe at amandla egcwele. Ngenxa yalokho, Cassandra iwine.
Kamuva Betgerl okophula ejele Bruce Wayne, efakazela ukuthi umbulali wangempela - kayise, uDavide.
Kassandra ababulali League
Ukuthumela umzali wakhe begazi abasetilongweni futhi ziphathelene kokuzibulala, Kassandra Keyn wakwazi ukugxila ekulweni nobugebengu.
Joyina i-league wobulungisa, kuba isikhathi eside kwesokunxele Ubutha futhi uye wahlanganyela ohambweni ezibalulekile eziningana.
Lapho ngibuyela ekhaya, wathola ukuthi zonke Bat-umndeni kwesokunxele eholidini, nokulwa nobugebengu Ubutha Harvey Dent, waphinda wakunqoba bayasangana yakhe. Khona-ke Cassandra wedwa izulazula ezitaladini zalelo dolobha, kwaze kwaba ngosuku oluthile kumuntu osonile okuthiwa Deathstroke akusho ukwethula wakhe emuthini, okwenza intombazane okubi.
Ngaphansi kwethonya izidakamizwa Cassandra ushiya Bat-umndeni wajoyina iNhlangano ababulali. Ngu ngokusebenza kuyo, kwenza eziningi zobugebengu ngisho azame ukuqeda Supergirl. Nokho, Robin akabashiyi imizamo ukugcina intombazane nokuthola ikhambi, emethula umngane wakhe.
Kutholwa abuyele Bat-umndeni, Cassandra bahlushwe wokuzisola ngezenzo zakhe futhi ufuna ukuthola uyise Deathstroke, okuyizinto ube nesandla kukho konke akwenzile. Wathola David Kane, yena bamshaya ulwa fair, kodwa hhayi abulawe.
Ngo-editions okwalandela yencwadi yamahlaya eseneminyaka umholi we abangakholwa, futhi bahlanganyela inethiwekhi wenhlangano.
Phakathi ukufa okusobala Batman Cassandra lusizi kakhulu ngakho wayeka imvunulo Betgerl owayeyintombi yakhe Robin - Stefani Braun, walwa ubugebengu ngaphansi Spoiler isibizo. Zona efanayo Miss Kane Wayne ngiya eHong Kong, lapho aqhubeka khona ukulwa ne ababi e evamile black ingubo. Kamuva, wathola Robin wamnika i suit eziphambili Betgerl.
Ekuqaleni, yena akazange ufisa ukusisebenzisa, kodwa ukuba abe amelele 'Batman "Corporation e-Hong Kong, ke nokho waqala ukubeka kuso, futhi wathatha igama nobuqhawe Black nelulwane.
Ukulwa ngaphansi mbumbulu ezintsha, wakwazi ukudambisa izigebengu eziningi eziyingozi Kassandra Keyn. DC Comics Eminyakeni yamuva ukuchaza ukubuya yesikhashana Heroine e Ubutha City, lapho belwa umakhi villain.
Ugqozi lokuqala romantic Heroine baba Clone of Superman - Conner Kent.
Igama lokuqala le ntombazane eyayikusho, kokuba ikhono lokukhuluma, kwaba "Misa".
Naphezu sibalo emide emincane, Cassandra uKhayini uthanda ukudla kahle.
Lokhu uhlamvu uvele amahlaya "Batman," "Batman:". "Legends we Knight Dark," "Justice League Elite" futhi "Corporation" Batman
Cassandra eziyizintandokazi ice cream - chocolate, njengoba ukhetha ukuba angaphuzi ikhofi, itiye "Assam".
Miss Kane Wayne waba isisulu sokuthunjwa ukudideka, njengoba protagonists eziningi oqanjiwe. "Izinsimbi Zomculo sokufa" - Kassandra Keyn ngezinye izikhathi ibizwa ngumlobi yochungechunge lwezincwadi ngephutha. Lokhu kuyiphutha ubangelwa yokuthi umbhali isidlaliso we oludumile - Kassandra Kler.
Naphezu biography kunalokho bezijabulisa Abadali kinovselennoy DC sokungabaza ukuthi umlingisi Cassandra izovela ke esikhathini esizayo esiseduze. Naphezu kwakho konke lokhu, Miss Kane Wayne buyaqhubeka abalandeli abaningi emhlabeni wonke, futhi owazi, mhlawumbe azisole ku-akhawunti yakhe ukuphathwa ikusasa DC Ezokuzijabulisa.
Lermontov: ukuhlaziywa inkondlo "Ezweni"
Isikhwama Red: sizogqokani okusemandleni ayo?
Simple isivumelwano sokuba nguzakwethu: izici nemibandela yeziboshwa
Yeka lens imaging sibathelela izibonelo
"Ukwakhiwa kweSoviet isimo" etafuleni. Ukwakhiwa likahulumeni waseSoviet: kafushane mayelana main
Schrag wakhuluma: accessory yasekuqaleni isiphi isambatho
Nuts Gingko biloba: izakhiwo ewusizo, amakhemikhali ukwakheka kanye nenombolo calorific ka